Unreleased Album | Myanmar Mp3 Album
Home / Unreleased Album
Tag Archives: Unreleased Album
ကောင်မလေး ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်သလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါ အားနည်းချက်လေးတွေတော့ရှိသေးတယ်ဗျာ့ နားထောင်ပေးကြပါအုံး ဗျာ…. [email protected] ကိုဆက်သွယ် အကြံပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…… Download Here
May 16, 2013 tharpauk ၀ါသနာရှင် အခွေများ Media Myanmar Underground Unreleased Album Leaveacomment
I miss you (သားသား(cs))
November 7, 2011 tharpauk Media Unreleased Album Leaveacomment
ဇိုင်းယန်း ရဲ့ ပထမဆုံး Album လေးပါ ထွက်တာတော့မကြာသေးဘူးးးးးးးးး နားထောင်ပြီးအားပေးကြပါအုံးးးးးးးးးးး Thank Alot…………. 1).အားနာရင်ခါးပါမယ် 2).တစ်ဖက်သတ်စိတ်ကူး 3).ဘုရားပေးတဲ့ချစ်သူ 4).ပါးချိုင့်လေး 5).ငါမသေချင်သေးလို့ 6).အရင်လိုချစ်သေးလား 7).ကြောင်ခံတွင်းပျက် 8).အင်တာနက်အချစ် 9).အမှတ်တစ်မဲ့ချစ်သူ 10).ချစ်တော့ချစ်တယ်………ဒါပေမဲ့ 11).လုပ်လိုက်လေ…ရှုပ်ရင်ရှင်းမယ် 12).နွယ် Download Link http://hulkshare.com/xwpqmtas2rrz [email protected] ကိုဆက်သွယ်ပြီးအကြံပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ…….. http://www.myanmaronlinemusic.com/2011/11/zion-tha-phat-that-sate-gu.html မှာလဲ တိုက်ရိုက်နားထောင်နိုင်ပါသေးတယ်..
November 3, 2011 tharpauk အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ၀ါသနာရှင် အခွေများ Media Myanmar Underground New Myanmar Albums Unreleased Albums Unreleased Album3Comments
သားသား ရေးပေးထားတဲ့သီချင်းလေးပါ နားထောင်ပေးပါအုံး [email protected] ကိုဆက်သွယ်ပြီး ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်ဗျာ…… Download Link:// http://hotfile.com/dl/129999211/7d4229b/Chit_nay_mal.mp3.html
September 17, 2011 tharpauk ၀ါသနာရှင် အခွေများ Media Myanmar Underground Unreleased Albums Unreleased Album 1 Comment
Listen to my heart (သားသား ၊ ဖိုးခွါး)
သီချင်းအသစ်လေးတစ်ပုဒ်ပါ…… Download Link…. http://www.mediafire.com/?6pm923acjemdjth#2 http://hotfile.com/dl/129594368/b9196e4/Listen_to_my_heart.mp3.html
September 14, 2011 tharpauk ၀ါသနာရှင် အခွေများ Media Myanmar Underground tharpauk Unreleased Album Leaveacomment
(бЂћбЂ¬бЂёбЂћбЂ¬бЂё бЃЉ бЃЂбЂ®бЂёбЃЂбЂ® бЃЉ бЂ–бЂ­бЂЇбЂёбЂЃбЂјбЂ«бЂё бЃЉ бЂ‡бЂ­бЂЇбЂ„бЂёбЂ№бЂљбЂ”бЂ№бЂё бЃЉ бЂ±бЂџбЂ™бЂ­бЂЇ)
бЂ™…….(бЃЂбЂ®бЂёбЃЂбЂ®) http://hulkshare.com/hmonrz98lkka бЂЎбЂ›бЂ„бЂ№бЂњбЂ­бЂЇ(бЂћбЂ¬бЂёбЂћбЂ¬бЂё) http://hulkshare.com/alhikgbrhhkf бЂЎбЂЃбЂєбЂ…бЂ№бЂ±бЂђбЂјбЂ”бЂІбЂ·(бЂћбЂ¬бЂёбЂћбЂ¬бЂё бЃЉ бЃЂбЂ®бЂёбЃЂбЂ® бЃЉ бЂ–бЂ­бЂЇбЂёбЂЃбЂјбЂ«бЂё) http://www.mediafire.com/?d0jni8j4dupkfa6 бЂЎбЂ›бЂ„бЂ№бЂњбЂ­бЂЇбЂЃбЂєбЂ…бЂ№бЂ±бЂћбЂёбЂњбЂ¬бЂё (That you know) – ZION http://www.mediafire.com/?fntt80co282f5a3 бЂ’бЂ«бЂ±бЂ•бЂ™бЂІбЂ· (бЂћбЂ¬бЂёбЂћбЂ¬бЂё бЃЉ бЃЂбЂ®бЂёбЃЂбЂ®) http://hulkshare.com/5mfvy3q3t6yd бЂ±бЂ”бЂ¬бЂЂбЂ№бЂ†бЂ¶бЂЇбЂёбЂЎбЂЃбЂєбЂ…бЂ№(бЃЂбЂ®бЂёбЃЂбЂ®) http://hulkshare.com/gfooopqvwmv0 бЂ…бЂ­бЂђбЂ№бЂЂбЂ°бЂёбЂ±бЂњбЂёбЂ”бЂІбЂ·…(бЂћбЂ¬бЂёбЂћбЂ¬бЂё бЃЉ JOB) http://hulkshare.com/pc54023cpbpd бЂЎбЂ±бЂ»бЂ–бЂђбЂ…бЂ№ (бЂ±бЂџбЂ™бЂ­бЂЇ) http://hulkshare.com/umdz78vvqa8c
August 20, 2011 tharpauk ၀ါသနာရှင် အခွေများ Unreleased Albums Unreleased Album2Comments
မ သီချင်းလေးပါ သိပ်တော့ မလန်းသေးဘူး ဒါပေမဲ့ ကောင်းပါတယ်ဗျာ နားထောင်ပေးပါအုံးနော် သားသား(cs) ဆိုထားတာလေးပါ သူ့ဆီဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ evilplusdevil.gmail.com ကို ဆက်သွယ်လိုက်ကြပါဗျာ… Download Link http://hulkshare.com/n9r71a4rjmem http://www.mediafire.com/?lc2kpvr858du8f5
July 23, 2011 tharpauk ၀ါသနာရှင် အခွေများ Media Unreleased Album Leaveacomment
ကျောင်းသားဘ၀အဖြစ်အပျက်လေးကိုဆိုထားတာပါ နားထောင်ပေးပါအုံးနော်….. သူ့ဆီဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ [email protected] Download Link: http://www.mediafire.com/?b27lnqd2udsn1h4 http://hulkshare.com/wyi7rxn87dg4
July 15, 2011 tharpauk ၀ါသနာရှင် အခွေများ Media Myanmar Underground Unreleased Albums Unreleased Album Leaveacomment